Amniga Jowhar oo la adkeeyay xilli lagu jiro ololaha doorashooyinka Hirshabeelle. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR HIR-SHABELLE Amniga Jowhar oo la adkeeyay xilli lagu jiro ololaha doorashooyinka Hirshabeelle.
Amniga Jowhar oo la adkeeyay xilli lagu jiro ololaha doorashooyinka Hirshabeelle.
Ciidanka boliiska magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in amniga magaalada uu yahay mid leysku haley karo kaddib howlgalo ay ka sameeyeen dhammaan xaafadaha ay ka koobantahay magaalada Jowhar.
Taliyaha saldhigga boliiska caasimadda Jowhar dhamme Maxamed Siyaad Cali “Canjeex” ayaa tilmaamay in xaafadaha magaalada iyo bannaankeeda ay ku leeyihiin xarumo laga sugo ammaanka ayna ka sameeyaan howlgalo joogto ah.
Howlgallada sare loogu qaadayo ammaanka ayaa waxey ku soo aadayaan xilli Jowhar ay ka socdaan ololaha doorashada baarlamaanka 2-aad ee Hirshabeelle, waxaa soo dhaweeyay shacabka ku nool caasimadda maamulkaas.
Previous articleShirka Wadatashiga istiraatijiyadda kheyraadka Biyaha oo maalintii labaad galay+Sawirro.
Next articleQM “Waxaan murugada la qeybsanaynaa qoysaska dadkii naftooda ku waayay qaraxii 14-kii Oktoobar”
Madaxweynaha maamulka Puntland oo maanta safar ugu ambabaxay dalka Itoobiya+Sawirro.
Taliye Xijaar oo kormeeray saldhigyada Booliiska magaalada Dhuusamareeb.
Wasiirka cusub ee Cadaaladda XFS oo soo dhaweyn loo sameeyey+sawirro.